चर्चित टिकटक कलाकार निशा गुरागाईको बाहिरियो यस्तो से’क्सी भिडियो – हेर्नुहोस् भिडियो – Bishal4You
चर्चित टिकटक कलाकार निशा गुरागाईको बाहिरियो यस्तो से’क्सी भिडियो – हेर्नुहोस् भिडियो
Bishal4You १७ असार २०७७, बुधबार ०९:२८
नेपाल र भारतमा चर्चित टिकटक कलाकार निशा गुरागाईको अ श्लील भिडियो बाहिरिएको छ । उनी आफैंले उक्त भिडियो आफ्नो भएको स्बीकारेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् म र मेरो प्रेमी उक्त भिडियोमा देखिएका हौं र यो नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो । उनले भाइरल गर्ने उद्धेश्यले नभै ब्यक्तिगत रमाइलोका लागि भिडियो खिचेको बताएकी छिन् । भाइरल भिडियोलाई रोकिपाउँ भनि हालै निशाले प्रहरीमा उजुरी समेत दिएकी छिन् ।
मुम्बईमा पर्ने खारघर पुलिस थानामा उनले दिएको उजुरी समेत हाल सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भएको छ । यसअघि नेपाली एक नायिकाको फेक अ श्ली ल भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ पुगेको एक नायिकाको फेक अ श्ली ल भिडियो सार्वजनिक भएपछि चलचित्र क्षेत्र त नाव ग्र स्त भएको थियो ।
नायिका यसको कानुनी उपचारका लागि समेत गएकी थिइन् । कसैको इज्जत र अस्मीतामाथि खेलवाड गर्नेविरुद्ध सबै एकजुट भएर कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने नायिका पूजा शर्माले आह्वान गरेकी सामाजिक सञ्जालमा आव्हान गरेकी थिइन् । इण्डियन स्पाइडर स्क्वाइडले अझै केही नायिकाहरुको अ श्ली ल भिडियो सार्वजनिक गर्ने ध म्की दिएको थियो ।
एक नायिकाको फेक अ श्ली ल भिडियो सार्वजनिक हुनु र इण्डियन स्पाइडर स्क्वाडको ध म्की ले नायिकाहरु चिन्तित बनेका थिए । तर, अहिले उक्त घटना सामसुम भएको छ । नायिका पूजा शर्माले फेसबुकमा लेखेकी त्यस समयमा लेखेकी थिइन्, ‘यस्तो घटिया सोच र कार्य गर्नेहरु विरुद्ध हामी सबै विवेकशील प्राणी एक भएर लाग्नु जरुरी छ । कसैलाई पनि कसैको इज्जत अ स्मितामा खेलवाड गर्ने अधिकार छैन ।
कलाकारलाई मात्रै नभर यो सबैलाई पर्न सक्छ । समयमै सजक हौँ । यसको विरुद्ध तुरुन्तै कानुनी उपचार खोजौँ । हाम्रो छात संगठन नेपाल कलाकार संघले तुरुन्तै पहल गरोस् । म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आफ्नो मात्र हैन अरुको पनि इज्जत गर्न सिकौं.
फेसबुकको भिडियो डाउनलोड गर्ने सजिलो App तपाईकोहरुको मोवाइलको लागि डाउनलोड गर्नुहोस् :- Download
उनकै घरअघि नै कसले पि’ट्यो सलमान खान र उनका भाइ सोहेल खानलाई?
२४ असार २०७७, बुधबार २१:००
घरमा एक्लै हुँदा केटीहरु यस्तो हर्कत गरेको भिडीयो सामाजिक सन्जालमा भाईरल – हेर्नुहोस् भिडीयो
१७ असार २०७७, बुधबार ०७:५६
मोडल आशिका तामाङलाई ‘खसिनी दिदी’ सलह किराको माया लागेपछि दिइन् यस्तो बयान
१३ असार २०७७, शनिबार २१:२९
आजबाट चलचित्र ‘छक्का पन्जा–३’ र ‘छ माया छपक्कै’ एपमार्फत हेर्न पाइने
१० असार २०७७, बुधबार १०:४७
९ असार २०७७, मंगलवार १७:१३
छक्का पञ्जा–३’ र ‘छ माया छपक्कै’ विश्वभरका दर्शकले हेर्न सक्ने
९ असार २०७७, मंगलवार १६:४६
भारतीय टीभीमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतबारे आपत्तिजनक टिप्पणी
आईसीयूमा उपचाररत महिलालाई यौ’न दू’व्र्य’वहार गरेको आरोपमा ४ जना स्वास्थ्यकर्मी समातिए
बोलिन स्वस्तिमा : भुवन केसी र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको विवा,दबारे
नेपाल सार्क मुलुकमध्ये पीसीआर परीक्षणमा अगाडि
ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो?
विद्यार्थी सवार बस दु’र्घ’टना : २१ जनाको मृ’त्यु, १५ जना घा’इते
निर्घा’त कु’टपि’ट गरेको भिडियो भाइरल – यसो भन्छन् मेयर
यस्तो अफर – मलाई गर्भवती बनाऊ र पाँच सय युरो लैजाऊ
अगस्ट १५ भित्रै भारतले कोरोना भाइरसको खोप सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको हो ? यस्तो छ वास्तविकता